Iitattoo zentanyeni zamadoda, amathuba amaninzi kunye neentsingiselo | Ukwenza umvambo
Iitattoo zentanyeni zamadoda, amathuba amaninzi kunye neentsingiselo
Nat Cherry | | Iitattoos kumadoda
Iitattoo zentanyeni zamadoda, nangona zibekwe kwindawo ethile yomzimba, zinamathuba amaninzi kunokuba kubonakala ngathi. Umzekelo, banokuba yinxalenye yoyilo olukhulu, bazimele, ngombala, kumnyama namhlophe ...
Siza kuthetha ngako konke oku kunye nokunye okuninzi kweli nqaku malunga ne-tattoos entanyeni yamadoda., apho, nangona ukuba iiplani zenziwa yindoda yesini, akufuneki ukuba zikhawulelwe kule nto. Kwaye, ngakumbi ukuba uthatha isigqibo sokufumana tattoo kule ndawo, sikwacebisa ukuba ujonge kweli nqaku elinye malunga tattoos entanyeni yonke, indawo enzima kwaye ebuhlungu.
1 Iimpawu zee tattoos zentamo
1.1 Iintlungu zezi tattoos
1.2 Zidla ngokunyamalala ngokulula
1.3 Thatha ixesha elide ukuphilisa
1.4 Ngaba iitattoo zentamo zamadoda ziyacetyiswa?
2 Iindawo zeTattoo entanyeni
2.1 Ngaphambi kwe
2.3 Emva kwendlebe
2.5 Ngaphantsi kwesilevu
3 Iintlobo ze tattoos entanyeni kumadoda
3.1 Uyilo olunye oluncinci
3.2 Uyilo olunye olukhulu
3.3 Iinxalenye ezincinci ezahlukeneyo
Iimpawu zee tattoos zentamo
Iitattoos zentanyeni, kwaye ke iitattoos zentamo zamadoda, babe nothotho lweempawu ezibenza babe zodwa kwaye bahluke yezinye iitattoos, ngakumbi kwindawo ezikuyo. A) Ewe:
Iintlungu zezi tattoos
Iitattoo zentanyeni zibuhlungu kakhulu, enyanisweni, yenye yezona ndawo zibuhlungu kakhulu ukwenza i-tattoo. Okubangela umdla, kwaye Nangona kuxhomekeke kakhulu kumqolo wentlungu nganye, kuthiwa kumadoda kubuhlungu ngakumbi ukwenza umvambo kwindawo engaphambili. kunye necala lentamo kunabasetyhini, abachatshazelwa ngakumbi ngasemva kwentamo.
Isizathu silula: ulusu olusentanyeni lubhityile kakhulu kwaye luzele ziziphelo zemithambo-luvo, ngoko ke iintlungu xa ubhala umvambo kukho ulandelelwano lwemini.. Ukongeza, ayibuhlungu kuphela, kodwa inokubangela ubunzima xa uphefumla ngexesha le tattoo, ukucaphuka kwesikhumba ...
Zidla ngokunyamalala ngokulula
Xa sithatha isigqibo nge tattoo yezi mpawu, kufuneka kwakhona sithathele ingqalelo ukuba kunokwenzeka ukuba icinywe ngokulula. Oku kungenxa yolusu, oluchazwe ngasentla luncinci kakhulu, ngoko ke ukuba umzobi we tattoo usebenza kakhulu okanye uxinzelelo oluncinci, umgangatho we tattoo uya kuchaphazeleka. Yintoni egqithisile, ngokuhamba kwexesha, ulusu entanyeni lukhubaza kwaye luphulukene ne-elasticity, ebangela ukuba tattoo ilahlekelwe yimo yayo yangaphambili.
Thatha ixesha elide ukuphilisa
Ekugqibeleni, ii tattoos zentamo zithatha ixesha elide ukuphilisa. Kwakhona, isizathu esona sizathu sokuba oku kwenzekayo kukuba ulusu olusemqaleni luncinci kakhulu kwaye, ngaphezu koko, lukwindawo apho sinokuthi sigubungele izambatho (umzekelo, ikhola yehempe , iikhati, iingubo) okanye ngempazamo, okanye nokuba ilanga likhanya ngokuthe ngqo ngakumbi.
Ngaba iitattoo zentamo zamadoda ziyacetyiswa?
Nangona kubonakala ngenye indlela, Iitattoos entanyeni nazo zinezinto ezilungileyo, ezinje ngokuba zinika ubomi kuyilo oluthile kwaye zipholile kakhulu.. Nangona kunjalo, apha sifuna ukuthetha ngesihloko ukuba singawuthathi umnqweno wakho, kodwa ukuze ube nalo lonke ulwazi olukhoyo kwaye unokwenza isigqibo.
Iindawo zeTattoo entanyeni
Nangona iindawo eziza kufakwa tattoo entanyeni ziqhelekile kumadoda nabasetyhini, inyaniso kukuba kumadoda kukho izinto ezikhethekileyo kuxhomekeke kwindawo abakhetha ukuyibhala entanyeni. Siza kuthetha ngazo ngezantsi:
Inxalenye yangaphambili, ngaphantsi kwe-chin nangaphezulu kwe-walnut, yeyona ndawo ibuhlungu entanyeni kwi-tattoo yamadoda. Njengoko besitshilo, ulusu lubuthathaka kakhulu. Kwimeko yoyilo olukhulu, oluhla luye kwi-clavicle, intlungu ibuhlungu ngakumbi, kuba kuloo ndawo ulusu luncinci kakhulu kwaye ithambo lifumaneka ngokukhawuleza.
Ngokuqinisekileyo ubonile ukuba icala lentamo yenye yezona ndawo zidume kakhulu ukufumana tattoo kule ndawo. Ukongeza ekuvumeleni uyilo oluninzi kunye nokubamba amehlo kakhulu, icala lincinci kakhulu kunelo langaphambili lamadoda.
Ukuba sinyuka kancinci ukusuka kwicala lentamo sifumana umva wendlebe, indawo efanelekileyo kwabo bafuna uyilo oluyingqondi okanye oluncinci. Nangona kunjalo, kwaye njengoko sithethile ngezinye izihlandlo, yindawo ebuhlungu kakhulu.
I-nape yenye indawo ethandwa kakhulu entanyeni apho ufumana khona ii-tattoos, kuba yindawo elumke kakhulu ekuvumela ukuba ubonise ukuyila okukhulu kunye nokuncinci. Ngokwesiqhelo iintlungu apha ziyanyamezeleka, ngakumbi kumacala omabini omqolo kunye nakwikhola. Nangona kunjalo, izinto ziyatshintsha xa kufuneka uhambe phezu komqolo kunye nesiseko sokakayi.
Ukhetho lweyona nto yantlandlolo, kwaye mva nje ifumana abalandeli abaninzi nangakumbi (nangona kufuneka kuthiwe inemvelaphi yayo kwizizwe ezininzi esele ziyenza) itattoos phantsi kwesilevu, indawo engaziwayo yentamo ukuza kuthi ga ngoku. Ukongeza kwimixholo yezizwe, imilo yale ndawo ingaba yinto efanelekileyo yokufumana ubuninzi bokuyila, ukongeza, yenye yezona ndawo zincinci zibuhlungu entanyeni kwi tattoo.
Iintlobo ze tattoos entanyeni kumadoda
I tattoos entanyeni, nokuba ngamadoda okanye abafazi, zisenokuba zeentlobo ngeentlobo ngokuxhomekeke kuyilo lwakho.
Uyilo olunye oluncinci
Olona yilo luncinci, oko kukuthi, lubandakanya into enye, ukusebenza kwiindawo entanyeni apho ngokwemvelo isakhelo, umzekelo emva kwendlebe okanye entanyeni. Eyona nto idumileyo i-motifs eyingqondi ibandakanya imihla, imizobo emincinci yemveli, ii-initials, iintyatyambo, izinto ... Zivame ukuba zimnyama namhlophe, nangona unokongeza umbala wombala ukuba ufuna ukugqama ngakumbi.
Uyilo olunye olukhulu
Uyilo olulodwa olukhulu ludla ngokuthatha ngaphezulu kwentamo. Njengokuba, Inokuthi ithathe indawo yomqolo kunye namacala entamo, ukusuka phantsi kwe-chin ukuya kwi-clavicle, ukusuka engalweni ukuya kwicala ... Ngokuqhelekileyo babonisa kakhulu kunye noyilo olukhulu olune-protagonism ngokwabo kunye nezilwanyana, imiboniso okanye i-mandalas entsonkothileyo. Ngamanye amaxesha ubunyani bude busetyenziswe ukwenza uyilo lube nomtsalane ngakumbi, kwaye zombini zinokufunwa ukuba zibe nefuthe kuyilo lombala kunye nakumnyama nomhlophe.
Iinxalenye ezincinci ezahlukeneyo
Okokugqibela, tKukwaxhaphakile kwi tattoos zentamo yamadoda ukukhetha amaqhekeza amancinci amancinci adityaniswe sisitayile esifanayo okanye umbono.. Uyilo oluncinci lwemveli olunje ngeenkwenkwezi, iiankile, iinyanga, iirozi zithandwa kakhulu… Ukuba ufuna uyilo olulumkileyo, ungakhetha umnyama nomhlophe, nangona umbala unokuwenza uphile.
I-tattoos yentamo yomntu lihlabathi lamathuba kwindawo ebuhlungu, kodwa ipholile kakhulu. Sixelele, ingaba unayo itattoo kule ndawo? Ebenjani amava akho? Yeyiphi idizayini oyinxibayo okanye ongathanda ukuyinxiba?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuzoba » Iindidi zeetattoos » Iitattoos kumadoda » Iitattoo zentanyeni zamadoda, amathuba amaninzi kunye neentsingiselo
I-Pokémon tattoo: zifumane zonke!
I tattoo zepineapple: iplasma esi siqhamo simnandi kulusu lwakho